Baolina kitra - Can 2021 :: Hisy fiovana maromaro ny Barea • AoRaha
Baolina kitra – Can 2021 Hisy fiovana maromaro ny Barea
Iray volana mahery sisa dia hiatrika ny dingana fifanintsanana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika amin’ny taranja baolina kitra na ny CAN 2021ny ekipampirenena malagasy na Barea. Ahitana fanovana tsikelikely ny Barea noho ny antony samihafa.
Nanaiky hiaro ny voninahi-pirenena malagasy amin’ny CAN indray, ilay mpilalao teratany renioney, Ramalingom Alexandre. Mpilalaon’ny Royal Excelsior Virton, ekipa any Belzika, ity lohalarana nosafidian’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena ity. Eo ihany koa anefa ireo mpilalao malagasy hafa tsy ho voantso indray.
“Hitako tsara ny vokatra azon-dRamalingom Alexandre, hatreto. Efa tamin’ny telo taona lasa izy no nodinihiko ny fomba filalaony. Mbola nilalao tany Frantsa ka nahatafiditra baolina tsy latsaky ny telopolo izy”, hoy ity teknisiana frantsay ity.
Mpilalao vaovao telo sahady, noho izany, no hanampy ny Barea amin’ny fihaonana amin’i Côte d’Ivoire, amin’ny volana marsa 2020.
Hiara-hilalao amin’ireo mpilalao efa niatrika ny CAN 2019 i Hakim Djamel Abdallah sy Hery Bastien ary Ramalingom Alexandre. “Ho hita eo ny fahaizan’izy ireo milalao amin’ireo mpilalao izay nampanonofy an’ireo Malagasy, tamin’ny taondasa. Tsy voatery ho tompontoerana akory izy ireo”, hoy hatrany i Nicolas Dupuis. Mety hitondra fanovana amin’ireo mpilalao efa ao anatin’ny Barea hatramin’ny niandohan’ny dingana fifanintsanana ihany koa itsy mpanazatra itsy, araka ny nambarany. “Niova klioba, tany Frantsa lasa any Thaïlande, kanefa tsy nampilaza akory Rakotoharimalala Njiva Tsilavina Martin, nefa tsy nilalao nanomboka tamin’ny volana novambra 2019. Ho hita eo ihany ny vokatra azony any amin’ny Nong Bua Pitchaya FC, klioba Diviziona faharoa any Thaïlande”, raha ny voalazan’itsy tompon’andraikitra voalohany amin’ny Barea itsy.
Mbola tsy nahita klioba ihany koa i Dimitri Caloin hatreto. I Jeremy Morel kosa naratra eo amin’ny feny indray. “Hijanona amin’ireo fampidirana mpilalao telo aho aloha. Miezaka ny hitazona an’ireo mpilalao teo aloha aho saingy miankina a m i n ’ ny zava – misy ny hanovana na tsia ny ekipa”, hoy izy namarana.
Fampiofanana ampitain-davitra Mitohy ny fampianarana kabary ataon’ny Fimpima
Baolina kitra sy fahasalamana Mivondrona miady amin’ny « coronavirus » ireo mpilalaon’ny Barea
Taranja hazakazaka Nahemotra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika amin’ny atletisma
Baolina lavalava Sokajian’i Berthin Zoto ho fahavalo henjana ny tsimok’aretina « Covid-19 »
Halatra tao amin’ny oniversiten’i Toliara :: Nifanafika ny mpianatra sy ny mponina tao amin’ny fokontany Ankilahila
Fifaninana hronantsary :: Antsoina ireo olona mitovy endrika amin’ny mpanjaka taloha